Fanadiovana ny lela amin'ny lalana mety - fantatrao ve ny dingana tokony hatao? | Bezzia
Susana godoy | | Torohevitra momba ny fahasalamana
Amin'ny ankabeazan'ny tranga dia miborosy nify isika, mampiasa rinse ary dia izay. Mihevitra izahay fa amin'ireo dingana fototra roa ireo dia hadio tanteraka ny vavantsika. Tsia, mbola misy dingana tena lehibe tokony hatao ahoana ny fanadiovana tsara ny lela.
Ny lela no hozatra manatanteraka asa betsaka indrindra satria manampy antsika hahatsapa ny tsiro rehetra nefa mandray anjara amin'ny fizotran-tsako koa, rehefa mitelina na afaka miteny fotsiny. Ka, mila ny fikarakaranao azy hanao veloma ny bakteria ary hankafy fofonaina vaovao. Te hahafantatra ny fomba fanadiovana azy ve ianao?
1 Ahoana no hahalalana raha misy bakteria ny lela
2 Ahoana ny fomba fanesorana ny loto amin'ny lela
3 Ahoana no hitazomana ny lelanao hadio sy mena
4 Ahoana ny fanesorana ny loko fotsy amin'ny lela
Ahoana no hahalalana raha misy bakteria ny lela
Rehefa miteny ny hoe manana vava madio tanteraka isika dia tsy maintsy ampidirina dingana maromaro hanaovana izany. Ny iray amin'izy ireo dia miborosy minitra roa. Avy eo, hosasana mandritra ny iray minitra indray isika raha mbola misy sisa tavela ao am-bavantsika. Fa farany, tsy maintsy mijery ilay fiteny isika. Toa mavokely ve? Io ilay loko tokony ho nananany satria io ihany no ahalalantsika fa tsy misy bakteria mivangongo ao aminy. SAINGY Raha mahatsikaritra firakotra fotsy ianao, dia ny mifanohitra amin'izay no izy. Ny fahadiovana dia mety tsy ampy na, indraindray, dia vokatry ny karazana aretina izany na amin'ny fanafody.
Ahoana ny fomba fanesorana ny loto amin'ny lela
Ny fanosorana tsara dia fiantombohan'ny fahadiovana am-bava tsara. Mifantoha tsara amin'ny nify rehetra, aza maika fa aza tampoka. Avelao hilatsaka moramora eo amin'ny vavanao sy ny lelanao ny savony, amin'izay afaka manalefaka ny bakteria izy.
Manaraka, mila manasa tsara ianao. Raha ataonao amin'ny rano mafana kely dia mbola ho tsara kokoa ny manalefaka araka ny lazaintsika hoe loto.
Raha miborosy nify isika dia tsy azo avela any aoriana. Afaka mividy a mpanala lela. Hosokafanao avy any aoriana ka hatrany aloha io faritra io, amin'ny fomba malefaka.
El ny fanasana vava dia iray amin'ireo dingana farany tokony hatao hamela ny vavanao hihavao noho ny taloha ary hisorohana aretina.
Ahoana no hitazomana ny lelanao hadio sy mena
Efa fantatsika fa io loko mavokely na mena io no milaza amintsika fa madio sy salama tanteraka ny lela. Fa inona no azoko atao mba hadio foana ny lelako? Tsotra, tena tsotra, satria isaky ny miborosy nify ianao dia tsy maintsy mahatadidy fa mandalo scraper. Raha tsy manana an-tànana dia azonao atao ny mamela borosy amin'izany. Iray izay tsy dia saro-kenatra loatra. Miaraka amin'ny, tokony diovinao intelo isan'andro ny lelanao. Hanao izany ianao rehefa avy miborosy volo ary farany, hampiasa bileta.
Ahoana ny fanesorana ny loko fotsy amin'ny lela
Ny sisa tavela amin'ny tsiro dia mahatonga antsika hahita ny lelantsika misy tapany na teboka fotsy, indrindra amin'ny tapany aoriana na afovoany. Priori, tsy misy tokony atahorantsika rehefa mahita azy ireo isika ary matetika dia zavatra izay ho afaka afaka andro vitsivitsy. Raha tsy izany dia tokony hijery amin'ny mpitsabo nify anao ianao. Raha efa hitanao ireo teboka ireo dia haka borosy iray ianao miaraka amin'ny kovetabe kely ary ampitainao amin'ilay faritra voakasik'izany. Aza adino ny manao azy indroa na intelo isan'andro dia hiverina amin'ny toerany mahazatra ny lela. Satria hanjavona ny loto mihary rehefa manadio tsara ny lela. Marina fa amin'ireto tranga ireto dia ny mpanala no tsara indrindra satria manokana izy ireo, fa ny borosy na ny sisin'ny sotro any an-trano ihany no hahavita azy. Azo antoka fa amin'ity fomba ity, dia hahazo ny lelanao ho salama indray ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » Torohevitra momba ny fahasalamana » Fahadiovana am-bava: Fomba fanadiovana tsara ny lela
Ahoana ny fomba hisorohana ny ankizy tsy hanao nofy ratsy